जे माग्यो त्यहि पुरा हुने यो कस्तो अचम्मको पाथिभरा मन्दिर, हेर्नुहोस् भिडियो ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > जे माग्यो त्यहि पुरा हुने यो कस्तो अचम्मको पाथिभरा मन्दिर, हेर्नुहोस् भिडियो !
admin September 8, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति, भिडियो	0
एजेन्सी । हिन्दु तथा बाैद्धमार्गीहरूकाे पवित्र मानिएको, आस्था तथा शक्तिकि प्रतिक पाथिभरा माताकाे मन्दिर ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । पाथीभरा मन्दिर हिन्दू एवं बौद्धहरूको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो । यो ताप्लेजुङ जिल्लाको १२ हजार फिट उचाइमा रहेको छ । विश्‍वास आस्था एवं पवित्रताकी देवी पाथीभराको यो पवित्र स्थल ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङ्गलिङबाट १९.४ कि.मी. पूर्वोत्तरतर्फ ३७९४ मी.को उचाईमा अवस्थित छ ।